ओली सरकारले गर्‍यो अहिलेसम्मकै राम्रो निर्णय, क-कसलाई आयो खुसीको खबर ? — Sanchar Kendra
१कोरोना संक्रमितहरुको सङ्ख्या अत्यधिक बढेपछि नेपाली सेना परिचालन, बाहिर निस्किन नपाइने
२गीतको लगानी आठ लाख, कमाई ६० लाख
३कोरोना संक्रमितका लागि नयाँ नियम, १० दिन अस्पताल बसेपछि दोस्रो पीसीआर परीक्षण नगरिने
४फुटको संघारमा जसपा, ठाकुर र महतोलाई आयो यस्तो कडा चेतावनी
५आज ८१६७ जनामा कोरोना संक्रमण, १८७ को मृत्यु
६ओम हस्पिटलका साहुको हर्कत: बाउको नाममा गाडीको पास बनाएर छोरोलाई ससुराली सरर
७नयाँ भेरएन्टले देश थला पर्न लागेपछि ओली सरकारले गुहार्यो अन्तराष्ट्रिय शक्ति
८भारतीयले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोमा हमला, ४२ गाडी तो’डफोड २७ भवनमा आ’गजनी
९नेपालको कोरोना महामारीबारे बल्ल बोल्यो डब्लूएचओ
१०चीनले लगायो यस्तो प्रतिबन्ध
११भारतमा बढिरहेको कोरोना महामारीबारे बोल्यो डब्ल्युएचओ
१२कोरोना सक्रमणका कारण कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार पत्नीको निधन
काठमाडौं । सरकारले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीलाई जनही ५ लाख दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युएईविरुद्धको टि–२० र एक दिवसीय सिरिज जितेर आएका खेलाडीलाई जनही ५ लाख रुपैयाँ दिएर सम्मान गर्ने निर्णय गरेको युवा तथा खेलकूद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विश्वकर्माले खेलाडीलाई खेल्ने उचित वातावरण, पूर्वाधार र पारिश्रमिकका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे। उनले खेलेर भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्थामा क्रिकेट खेलाडीलाई पुर्‍याउने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे।
यसअघि हिजो नेपाल फर्किएको क्रिकेट टोलीलाई स्वागत गर्न बिमानस्थल पुगेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले सबै खेलाडीलाई जनही ५-५ लाख पुरस्कार दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको जानकारी गराएका थिए। सानै भएपनि खेलाडीहरुका लागि सरकारले गरेको यो निर्णयले सबै खेलप्रेमी नेपालीलाई खुसि तुल्याएको छ ।
मंगलबार मात्रै सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले विश्वमा नेपालको सम्मान र इज्जत बढाउन सफल भएको भन्दै बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् ।
ऐतिहासिक विजय हासिल गरेर फर्किएको भन्दै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई अध्यक्ष प्रचण्डले विहान खुमलटारस्थित निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रिय टीमका खेलाडीलाई हात मिलाएर बधाई दिएका हुन् ।
प्रचण्डले नेपालको ऐतिहासिक जीतले आफूलाई खुसी लागेको र देश समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको बेला राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्न क्रिकेट खेलमा भएको प्रगतिले ठूलो भुमिका खेलेको उनको भनाई थियो । राज्यले खेल क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएको र चितवनमा बन्ने स्टेडियमबाट क्रिकेट खेलको विकासमा झन योगदान पुग्ने प्रचण्डले बताएका थिए ।
आफ्नो तर्फबाट यो क्षेत्रको विकास र खेलाडिको मनोबल उच्च राख्न सक्दो सहयोग गर्ने समेत उनले विश्वास दिलाएका थिए । प्रचण्डसँग भेटका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरु खुमलटार पुगेका थिए ।
पहिलो पटक एकदिवसीय र टी-२० सिरिज जितेर सोमबार स्वदेश फर्किएको नेपाली क्रिकेट टोलीको भव्य स्वागत भएको थियो । खेलाडीको स्वागतमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, राष्ट्रिय खेदकुद परिषद (रापेख) उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिना, सदस्य सचिव केशव विष्ट लगायत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका थिए । खेलाडीहरुका लागि रातो कार्पेट समेत विछ्याइएको थियो ।
यसैबीच राखेपले क्रिकेट खेलाडीहरुलाई जनही ५ लाख दिन सिफारिस गर्ने भएको छ । सदस्य सचिव विष्टले भने, प्रत्येक खेलाडीलाई ५ लाख दिन भोलि मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव लैजाँदैछु ।’
यसपटक तेस्रो तथा अन्तिम टी-२० यूएईमाथि १४ रनको जित हात पार्दै नेपाललाई टी-२० सिरिज जिलाउने क्रममा नेपाली खेलाडीहरुको प्रदर्शन लोभलाग्दो थियो । कप्तान पारस खड्कासँगै विनोद भण्डारी र सन्दीप जोराले विस्फोटक ब्याटिङ गरेका थिए भने अभिनाश बोहोरा, करण केसी र अन्तिम ओभरमा ललित राजवंशीले उत्कृष्ट बलिङ गरे । तर, धेरैको मन उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले जिते ।
त्यसमा पनि अन्तिम ओभरको पहिलो बलमा ज्ञानेन्द्रले लिएको क्याच लोभलाग्दो थियो । यदि यो बलमा छक्का वा चौका भएको भए खेल नेपालको पक्षमा नआउन पनि सक्थ्यो ।
तर, ज्ञानेन्द्रले डाइभ हान्दै क्याच लिएका थिए । ‘एउटा फिल्डरका रुपमा कति छिटो बलमा पुगौं भन्ने हुन्छ । बाउन्ड्री लाइनमा फिल्ड गरिरहेको छु भने कसरी चौकाछक्का रोक्ने, कसरी क्याच लिने भन्ने हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यो बेला क्रुसल टाइम थियो । त्यो बल बाउन्ड्री वा छक्का हुनु हामीलाई दबाव हुनसक्थ्यो ।’
‘बल देख्न वित्तिकै कति चाँडो पुगौं भन्नेभयो । सकेसम्म क्याच लिने र नभए पनि बाउन्डी रोक्ने सकेेँ भने हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेर बल नजिक पुगेको थिए । हात लगाएँ र क्याच नै लिन सफल भएँ’ ज्ञानेन्दले अघि भने । ललित राजवशीको बलमा ज्ञानेन्द्रले लिएको यो क्याचसँगै खेल नेपालको पक्षमा आयो ।
तर, ज्ञानेन्द्र भने त्यो भन्दा पनि साइमन अनवरको क्याचलाई महत्वपूर्ण मान्छन् । जुन उनैले करण केसीको बलमा लिएका थिए । अनवर राम्रो पारी खेलिरहेका थिए र उनले यूएईलाई जिताउन सक्थे । तर, आठौं ओभरको पहिलो बलमा बलमा ज्ञानेन्द्र मल्लले लङ अन बाउण्ड्रीमा एक हातले क्याच लिइदिए ।
उपकप्तान ज्ञानेन्द्र भन्छन्, ‘अन्तिम ओभरको भन्दा साइमन अनवरको क्याच निर्णायक मान्छु ।’ नेपाललाई टी-२० सिरिज दिलाउने त्यो खेलमा उपकप्तान ज्ञानेन्द्रको समग्र फिल्डिङ अविश्वसनीय थियो । त्यसैले त ब्याटिङ प्रशिक्षक उमेश पटवालले खेलपछि करण म्यान अफ दि म्याच भएपनि वास्तविक नायक ज्ञानेन्द्र भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
यस्तै अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)का प्रतिनिधिले त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरको निरीक्षण गरेका छन् । कीर्तिपुर मैदान एकदिवसीय सिरिज खेलाउन योग्य भए नभएको अवलोकन गर्न आईसीसीका प्रतिनिधि एण्डी अड्किङसन नेपाल आएका थिए । उनले मंगलबार विहान त्रिवि क्रिकेट मैदान पुगेर पिच, आउट फिल्ड लगायतको अवलोकन गरेका छन् ।
आईसीसीका नेपाल प्रतिनिधि भावना घिमिरेले भनिन्, ‘उहाँले अब आईसीसीमा रिपोर्ट पेश गर्नुहुन्छ । त्यसपछि केके पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हो थाहा होला ।’ त्रिवि क्रिकेट मैदानको पिच निकै पुरानो भइसकेको छ । ३० यार्ड र आउट फिल्ड पनि राम्रो छैन । प्लेयर बक्स त छ तर, त्यहाँ पनि पर्याप्त पूर्वाधारहरु बनेको छैन ।
त्रिवि क्रिकेट मैदानले छिट्टै तयार हुने अवस्था भएमा सन् २०१९ को मध्यतिरै पनि नेपालमा सिरिज हुनसक्ने बताइएको छ । गत चैतमा एकदिवसीय मान्यता पाएको नेपालले हालै मात्र यूएईविरुद्ध सिरिज जितेको थियो ।
कोरोना सक्रमणका कारण कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार पत्नीको निधन
अबेर राति सकिएको ओली-नेपाल वार्तामा के भयो सहमति ? भिम रावलले खोले यस्तो रहस्य
कस्तो रहला आज देशभरको मौसम